Maxaad tirtiray ama sawiro laga badiyay lagu soo kabsaday karaa?
Waxaa xaqiiqo ah in dhalashada user markasta oo tirtirtaa files ama sawiro ay la soo kabsaday karaa iyada oo aan wax ka kaaftoomi iyo arrinta oo arrintan la xiriira barnaamijyada software-kabashada xogta waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Ujeedadu waxay fikir la xiriira waa in sida barnaamijyada soo kabashada xogta ay awoodaan si ay u helaan wax ay sameeyeen wax waqti ah gudahood oo dhan halka user iyo OS ma ay awoodaan in ay dib u soo ceshano faylasha. Jawaabtu waa in marka file s a tirtiray waxa ay weli ku drive ay adag tahay ilaa aan la overwritten by file kale isla goobta. Barnaamijyada kabashada software waa kuwa aan kaliya la xiriira utilities heer sare ah, laakiin sidoo kale in la hubiyo in baaritaan qoto dheer waxaa la sameeyay arrintan la xiriira in la hubiyo in files waxaa soo kabsaday iyo user helo natiijada in ay yihiin la doonayo.
Haddii aan si qalad ah la tirtiro xogta ka card SD, waxa habboon in aan sameeyo?
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo software kabashada xogta lacag la'aan ah oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Dhibic oo loo tixgeliyo in arrintan la xiriira waa in user hubaal dooran kartaa barnaamij lacag la'aan ah si aad u hesho files ka kaarka SD in lagu tirtiro laakiin tayada guud joogo waxaa sida free shaqeyn doonaa si waafaqsan lacag ma noqon doonto in user uu leeyahay ku qaataan oo farsamo ahaan ay dhacdo in tani ay tahay eber. Si aad u hubiso in files yihiin baxey waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan utility software ah oo uu soo tiriyaa sida ugu fiican ayaa laguu macnayn doonaa qeybtii dambe ee qodobkan iyo waxa ay sidoo kale hubin doona in user helo wada dhammaaday shuqulkii falay click hal iyo iyadoo wax dhibaato ah.
Sidee inuu ka soo kabsado sawirada tirtiray ka card SD
Waa mid ka mid ah kuwa su'aalaha jawaabta ah taas oo ah magaca uu u xuub-bedeli lahaa seenyada iyo shuruudaha baadhi isticmaalaha iyo magaca utility tani waa Wondershare Photo Recovery . Barnaamijka waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo tan gobolka ee wax kaqabashada xogta tahay fursadaha in aan la heli karin meelo kale. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka taageeraa in ka badan 500 oo ah qaabab oo sidaas daraaddeed waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo file fasalka kasta ama ku sifayn waa baxey oo aan wax arrin oo dhib. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada lagu soo diyaariyay hayo maskaxda ku seenyada guud iyo arrimaha user a laga yaabaa inuu wajaho in arrintan la xiriira.
Ka dib waa qaabab in waxaa taageera barnaamijka si aad u hesho natiijo ugu wanaagsan ee user ee arrintan la xiriira marka ay timaado soo kabashada xogta:
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka card SD la Wondershare Photo Recovery
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ee:
Barnaamijku wuxuu 1. waa in lagala soo bixi, rakibay oo bilaabay inuu booqday URL http://www.wondershare.com/data-recovery/photo-recovery-guide.html si interface ugu weyn ee u muuqataa,
2. Ka dib markii la garaaco button bilowga waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in drive ka halkaas oo wax kaqabashada xogta loo baahan yahay la doorto:
3. button Skaanka waa ka dibna in la sii adkeeyey si loo hubiyo in hannaanka asaasiga ah waxay ka bilaabantaa iyo barnaamij software helo oo dhan photos mar ma gudahood oo dhan. Kuwa in ay tahay in la raadsan si fudud loo riixi kartaa in ay doortaan iyo badhanka ka bogsanayaan ka dibna in la weeraray si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo habka uu dhamaado,
Hel sawiro aad tirtiray leh oo dhan in mid ka mid Data Recovery Software dib
Haddii user uusan awoodin in uu dib u soo ceshano sawirada habka kor ku xusan markaa waxaa lagula talinayaa inay raacaan link ee software Wondershare Data Recovery si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo. Complete Hagaha ma doonaa oo kaliya in la soo bandhigay, laakiin user ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa Screenshot guud ahaan geeddi-socodka oo loo isticmaali karo tixraac ah si loo hubiyo in hannaanka weli sahlan. Wondershare Data Recovery Arrintan la xiriira waxaa loo yaqaan barnaamij samayn kara yaabab iyo user inay hubiyaan in files yihiin baxey oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi kara. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in wixii kaloo lagu sameeyo hab fiican oo arrinta guud loo xalin lahaa iyadoo la raacayo habka ku xusan in la doono ee hoosyimaada halkan si aad u hubiso in hanuun user la bixiyo inta suurtogalka ah habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah:
1. rasmi ah URL sida http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in arrinta la xalin iyo user helo barnaamijka soo bixi:
2. Nooca Ufbaa ayaa markaas waa in loo doortay in arrintan la xiriira:
3. Markaas yimaado goobta file halkaas oo ay lumay,
4. Marka faylasha waxaa lagu muujiyey user iyaga soo kaban karto, sida rabitaan:
Talooyin ku saabsan gurmad xogta SD Card
Ka dib markii qaar ka mid ah talooyin la xidhiidha mawduuca sakhiray:
1. Sata drives laga iibsan waa in la hubiyo in gurmad card SD ee loo abuuray si fudud oo ku qanacsan.
2. gurmad card SD waa in lagu meeleeyaa gal ammaan ah si ay xogta ammaanka iyo waqtiga oo dhan aamin
3. gurmad waa in aan marnaba loo beddelin sida ku beddelaan gurmad xaqa reebi doonaan geynta iyo hubiyo in user marnaba helo waxyaabaha uu asalka ka dhigi doonaa.
> Resource > Mac > Ladnaansho sawirada tirtiray ka card SD ee Mac iyo daaqado 3 tallaabo